Fiaraha-monina - Wikipedia
Ny fiaraha-monina dia ny teny hamaritana ny olombelona miaina (iombonana, anisan'ireo ny tambajotra sosialy sy ny herin-tambajotra). Noho izy tsy maintsy mampitehanampy ireo tena mahery sy manan-karena ireo mahantra, tena zava-dehibe amin'ny fiaraha-monina ny zom-pirenena, zo sy ny fotoana voafetra. Ireo no fototra fomba hahazoana rariny. Raha mirava ireo dia manomboka mihevitra fa tsy rariny ilay fiaraha-monina ary manomboka mifangalatra, tsy manaiky mifanampy, na manomboka mijery ireo mpanana noho tena fa mangalatra.
Na dia samihafa aza ny fiaraha-monina tsirairay, mitovitovy ny fomba firavany: hosoka, halatra, herisetra, ady na vonom-poko raha tsy mahita ny famantarany ao amin'ny fiarahamonina intsony ny olona, ary mahafantatra amin'ny heveriny fa "foko". Amin'ny fiaraha-monina vaovao dia mety ahitana ireo olona mbola manaiky ny fitsipika na afa-belona tamin'ny fitontonganan'ilay fiaraha-monina taloha.
Raha horefesina ny hery sy hiray saina ny fiaraha-monina misy mpikambana vonona hanampy ny tsirairay, dia antsoina hoe kapitaly ara-tsosialy izany, satria mahasolo ny endrika kapitaly hafa ilay izy. Kely kokoa ny vola ilaina rehefa betsaka ny firaisan-kina eo amin'ny fiaraha-monina, satria ny fikambanana no solon'ny vola.
Na izany aza, matetika, tsy refesina mivantana ny hery, fa heverina ihany. Manao zavatra mety mampidi-doza ny olona raha tohanan'ny fiaraha-monina. Ohatra, Ireo izay tsy hankatò ny lalàna, ary manantena ny mpiara-monina aminy ho hanafaka azy amin'ny didim-pikambana amin'ny Fitsarana Ambony.
Mametraka fitsipika ho an'izany karazana fiaraha-miasa izany ny fifanarahana ara-tsosialy. Karazana fifanarahana ara-tsosialy iray ny lalàm-panorenana - izay mamela ny fitsarana ny mpitsara na ny manapa-kevitra fa ny lalàna, fa tsy ny olona, no tsy mety, araka ny fitsipika ny fiaraha-monina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiaraha-monina&oldid=694034"
Dernière modification le 17 Desambra 2014, à 17:39
Voaova farany tamin'ny 17 Desambra 2014 amin'ny 17:39 ity pejy ity.